प्रिमिएर लिगका सर्वोकृष्ट ५ खेलाडी !! - Experience Best News from Nepal
प्रिमिएर लिगका सर्वोकृष्ट ५ खेलाडी !!
भर्जिल भ्यान डाइक , लिभरपुल
डच फुटबलर भर्जिल भ्यान डाइक सन् २०१५ देखि नेदरल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टिममा पर्न सफल भए । यसभन्दा अगाडि उमेर समूहको फुटबल खेलिरहेका भर्जिल भ्यान डाइक सन् २०१८ अघिसम्म साउथम्टन क्लबमा आबद्ध थिए । यो वर्षको बलोन डिओरमा लियोनल मेस्सीसँगको प्रतिस्पर्धामा भ्यान डाइक उपविजेता रहे । लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिग दिलाउन सफल डिजेकले अंकका आधारमा गत वर्ष म्यानचेस्टर सिटीभन्दा पछि परेर प्रिमियर लिगको उपविजेता बनाएका थिए । लिभरपुल क्लबबाट उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आएका डिजेकको सोही क्षमता देखेरै क्लबले स्थानान्तर गर्दा ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।
सर्जियो अगुएरो , म्यानचेस्टर सिटी
अर्जेन्टिनाकै क्लबमा प्रोफेसनल फुटबल करिअर विकास गरिरहेका सर्जियो अगुएरोलाई एथलेटिकको म्याड्रिडले सन् २००६ मा आफ्नो क्लबमा भित्र्यायो । सन् २०११ मा म्यानचेस्टर सिटीले अगुएरोलाई म्याड्रिडबाट आफ्नो क्लबमा भित्र्याउन ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्न मन्जुर भयो । यो स्थानान्तर सर्वाधिक मानिन्छ । प्रिमियर लिगमा २ सय ४४ गोल गरिसकेका एगुराले प्रत्येक सिजनमा ३० भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन्, जसका कारण उनलाई प्रिमियर लिगमा ‘मन नभएको स्ट्रइकर’ समेत भनिन्छ ।
लिभरपूल : यूरोपियन रेकर्ड २१ खेलबाट ६१ अंक !!
प्रिमिएर लिग चेल्सी र युनाइटेडको फराकिलो जित, युनाइटेड उक्लियो !!
प्रिमिएर लिग लिभरपूललाई चुनौती !!
प्रिमिएर लिगमा एक बर्षे अपराजय कायम गर्दै लिभरपूल !!
चेल्सीले निकाल्यो आर्सनल माथि सानदार कम्ब्याक जित !!
आज हुदै छन् प्रिमिएर लिगका ३ ठुला खेल लिभरपूल, सिटी देखि चेल्सी र आर्सनलको भिडन्त आज !!
यी ३ विशेष कारण टर स्टेगेनले रोजे बार्सिलोना, नत्र आज स्टेगेन म्यानचेस्टर सिटीमा हुने थिए !!